Raisintsika ohatra ny lavanila.
Manana lavanila efa masaka 1 tonne ny Exportateur iray, izany hoe ilay mpanondrana entana, (importateur no anarany raha mpanafatra entana avy any ivelany izy, ohatra mpanao fripperie manafatra entana, dia importateur izy izay, na ilay olona hividy ilay lavanila, dia importateur ihany koa no iantsoana azy).
Rehefa miresaka amin'ny client any ivelany izany ny tompon'entana na ilay exportateur, dia mizara roa ny mety fifanarahana:
Ny mpanondrana tompon'entana na exportateur sy ny mpividy entana importateur dia ny sisin-tanin'ny firenena roa tonta no raisina ho toerana anaterana sy hakana ny entana.
Fitanterana amin'ny sambo no resahintsika eto.
a- Prix FOB (Free On Board, na Franco à bord):
Ny tompon'entana, exportateur no mikarakara ny fandefasana ny entana hatreo anaty sambo. Izy izany no miantoka ny fahatongavan'ny entana eo Toamasina ohatra, ny fandoavana ny ladoany, ny fitadiavana ny sambo hitondra ny entana, ny fampakarana ny entana anaty sambo, ary ny assurance n'ny entana anaty sambo, sao misy very na simba na latsaka an-dranomasina.
Ny importateur, na ilay client kosa no mandray ny lany rehetra rehefa tonga any antseranan-tsambon'ilay firenena misy azy ny entana.
b- Prix CAF (coût, assurance, fret), anglais Prix CIF (Cost, Insurance and Freight)
Eto kosa dia ny tompon'entana mihitsy na exportateur no manatitra ny entana hatrany amin'ny client, na eo ivelan'ny vavahadin'ny port misy ilay firenena na hatrany amin'ny dépôt misy ilay client mihitsy.
Izany hoe ny Exportateur no mandoa ny fitanterana, ny assurance ary ny ladoany rehetra.
Ny Prix Fob izany dia mora foana noho ny Prix Caf.
3- Ahoana no anamarinana ny entana alefa sy ny akana ny vola
Ny client dia tsy afaka hijery ny entana ampidirina ao anaty sambo, na ny hatsarany, na ny lanjany. Dia manakarama orin'asa izy, toa an'ny Bureau Veritas, hanamarina eo amin'ny toerany raha mifanaraka tsara amin'ny taratasim-pifanarahana ny entana.
Ohatra, 14cm marina tokoa ve ny alavan'ny lavanila, fondue sa noire, milanja 1tonne marina ve...
Io izany ilay hoe échange documentaire, izay idiran'ny banky. Izany hoe rehefa voamarina ny entana, dia mba manamarina koa ny tompon'entana fa misy vola ihany koa ilay client importateur, sao lasa ny entana nefa ny vola tsy azo.
Mifanaraka izany ny bankin'ny roa tonta, ka rehefa manamarina ny Bureau Veritas fa tafakatra tsara anaty sambo ny entana mifanaraka amin'ilay contrat, dia ho azon'ny bankin'ny client ny volany.
Ka ny bankin'ny tompon'entana na ny exportateur dia hanamarina mialoha sao banky tsy azo antoka koa ny bankin'ny client, ka angatahany ho bloquer-na mialoha io volan'ny client importateur io.
Izany hoe ilay bankin'ny client izany no miditra engagement andoa ilay vola amin'ny bankin'ny tompon'entana, ka izay ifanarahany any, fa rehefa miainga ny entana, voamarin'ilay orinasa ekena iraisam-pirenena, dia misy vola mifindra amin'ny bankin'ny tompon'entana.
Eo moa matetika dia 30j-60j-90j no fetra hifanarahana andoavana ny entana, izany hoe efa tonga ny entana matetika vao misy ny fandoavana azy. Satria maharitra 30 andro ny dian'ny sambo mitondra entana mankany Europe, raha miainga aty Madagasikara.
Efa misy liste noire izany ireny banky fôpla ireny, izay bankin'olona mpisoloky, ka dia ny banky aty an-toerana no manamarina ireny banky ireny. Mazava ho azy fa maka ny anjarany koa ny Banky amin'ny fikarakarana izany rehetra izany, ka dia tokony ampidirina anaty masokarena na Prix FOB na Prix CAF no nanaovana ilay fifampiraharahana.